China Ngokuzenzekelayo Flexible Endoscope Washer Disinfector yoMvelisi kunye noMthengisi | Shinva
Oluzenzekelayo Flexible Endoscope yomsuki weentsholongwane
I-Automatic Flexible Endoscope Washer-disinfector yenzelwe ngokusekwe kwi-standard standard ye-ISO15883-4 esetyenziselwa ukuhlamba kunye nokubulala iintsholongwane kwi-Flexible Endoscope.
Rider series endoscope iqhoshana oluzenzekelayo ukugqiba yonke inkqubo yokuhlamba kunye neentsholongwane enye isiqwenga endoscope bhetyebhetye ngaphakathi imizuzu eli-15, ukuphucula kakhulu ukusebenza endoscopes ingeniso.
Uyilo lokhuselo lwe-Endoscope
■ Umsebenzi wovavanyo lokuvuza
Uvavanyo lokuvuza lwe-Endoscope luya kugqitywa ngaphambi kokunxibelelana nolwelo egumbini, kwaye lunokwenza uvavanyo oluqhubekayo ngexesha lomjikelo. Xa ixabiso lokuvuza elifunyenweyo lingaphezulu kwexabiso elimiselweyo, inkqubo iya kukhupha isibonisi esivakalayo nesivakalayo, kunye nokuphelisa umjikelo ngokuzenzekelayo
Inkqubo yokulandelela inkqubo
■ Inkqubo yokuprinta idatha
Isiprinta sinokuprinta inkqubo yokuhlamba kunye ne-disinfection yedatha kwi-endoscope nganye, okwenza kube lula kubasebenzisi ukugcina iirekhodi.
■ Inkqubo yokulawulwa kwedatha.
Inkqubo inokuqokelela ulwazi lwabaqhubi be-endoscope kwaye inkqubo yokuhlamba kunye ne-disinfection yedatha inokuqhagamshela inkqubo yekhompyuter yolawulo lomsebenzisi ngenethiwekhi, ekulula ukufikelela kulawulo lokungqamanisa ngolwazi lwesigulana kunye nokuhlamba i-endoscope kunye neenkcukacha zokubulala iintsholongwane.
Umsebenzi wokubulala iintsholongwane
After Emva kokugqiba ulondolozo, ukulungisa okanye ukuphazamisa umatshini, kufuneka usebenze inkqubo yokuzikhusela iintsholongwane.
The Umsebenzi we-self-disinfection function ungabulala iintsholongwane kwigumbi lomatshini kunye nombhobho, kubandakanya isihluzi se-0.1um, ukuthintela isher-disinfector ekubeni ngumthombo wongcoliseko.
Ukuhlamba kunye neentsholongwane
All Yonke imijikelezo, ukuhlanjwa kwemibhobho epheleleyo nokubulala iintsholongwane
Igumbi lokuhlambela elixhotyiswe ngemilomo yokutshiza kunye nengalo yokutshiza ejikelezayo enokwenza ukuhlamba kunye nokubulala iintsholongwane kumphezulu wangaphandle we-endoscope, ngelixa amanzi ajikelezayo angenza ukuhlamba okuqhubekayo kunye nokubulala iintsholongwane kuwo wonke umngxunya ongaphakathi we-endoscope.
■ Impompo yokunyusa amandla e-Endoscope lumen
Ngompu we-endoscope lumen booster ozimeleyo, unokwenza ukuhlamba ngokuqhubekayo kunye nokubulala iintsholongwane, irhasi okanye inaliti yamanzi kunye nokwenza i-biopsy okanye i-lumen lumen, ukuthintela ukwenziwa kwe-biofilm yebhakteria.
■ Ukuhluzwa kwamanzi anyukayo
Emva kokubulala iintsholongwane, iya kuhlamba i-endoscope ngamanzi acocwe ngesihluzi se-0.1um ukunqanda ungcoliseko lwesibini ngamanzi anyukayo angahlambulukanga.
Umsebenzi wokomisa unokuqonda ukomisa ukukhanya kwangaphakathi kwe-endoscope ngeendlela ezimbini, ukomisa umoya kunye nokomisa utywala.
Ukukhuselwa ngokugqibeleleyo komsebenzisi
■ Ucango oluzenzekelayo, utshintsho lweenyawo ezinyaweni
Bona ngamehlo ucango oluzenzekelayo, kulula ukugcina imeko yokuhlamba kunye neentsholongwane; iswitshi seenyawo ezinyaweni, ucango lunokuvulwa ngokukhatywa kancinane ngeswitshi.
■ Okufakwe ngokupheleleyo
Umqokeleli wechungechunge oluzenzekelayo lwe-endoscope washer-disinfector yenzelwe isakhiwo esivalwe ngokupheleleyo. iingcango zeglasi ezizenzekelayo ziya kucofa ucango ngokutywina gasket ngokuqinileyo, ukunqanda ivumba lesibulala zintsholongwane kunye nokukhuselwa komsebenzisi kwezempilo.
■ Izongezo zemichiza zongezwa ngokuzenzekelayo
Kwinkqubo yokuhlamba kunye nokubulala iintsholongwane, izongezo zemichiza ezinje ngee enzyme, utywala kunye nezibulala ntsholongwane zinokulinganiswa kwaye zongezwe ngokuzenzekelayo.
Function Umsebenzi wentsholongwane owenzekelayo wokubulala iintsholongwane
Umkhweli B uthotho oluxhotyiswe ngesixhobo esisisampulu seentsholongwane ezizenzekelayo esilungele abasebenzisi ukuba babeke esweni uxinzelelo lwesibulali-ntsholongwane kunye nokukhusela ukhuseleko lomsebenzisi.
Addition ukongeza iintsholongwane ngokuzenzekelayo kunye nokusebenza
Uluhlu lweRider B luxhobisa ngokudibanisa okuzenzekelayo kunye nomsebenzi wokukhupha. Xa ufaka isibulala-ntsholongwane, galela nje isibulali zintsholongwane kwigumbi lokuhlamba kwaye uqalise inkqubo yokubulala iintsholongwane. Xa ukhupha, qala nje inkqubo yokubulala iintsholongwane.
Egqithileyo IYunithi ye-XH507 yamazinyo
Okulandelayo: Zenzekelayo Door Chela wokucoca
Uhlobo oluxhomekeke kwikhabhathi yokugcina
Plate uhlobo kwikhabhinethi yokugcina